Macallinka ay filayaan Xiddigaha Manchester United inuu qaban doono shaqada Tababarennimo ee Kooxda oo shaaca laga qaaday – Gool FM
(Manchester) 24 Nof 2021. Xiddigaha Manchester United ayaa lagu soo warramayaa in ay filayaan in Macallin Mauricio Pochettino uu qabto shaqada tababaranimo ee kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford.
Kaddib bixitaankii Tababre Ole Gunnar Solskjaer, Man United waxa ay ka shaqaynaysaa sidii ay u heli lahayd beddelkiisa mustaqbalka fog ah si uu majaraha u qabto Kooxda xilli ciyaareedka 2022-23, iyadoo sidoo kale raadinaysa tababare ku meel gaar ah oo naadiga sii wada inta ka hartay xilli ciyaareedkan.
Michael Carrick ayaa waqtigan kooxda sii wada, laakiin tababaraha Paris Saint-Germain ee Pochettino ayaa ku soo baxay mid ka mid ah Macallimiinta ugu cad-cad ee fariisan doona kursiga looga arrimiyo garoonka Old Trafford.
Macallinka reer Argentine ayaa xaqiijiyay inuu ku faraxsan yahay Caasimadda Faransiiska xilli uu dhawaan qabtay shir jaraa’id, laakiin Jariiradda The Mirror ayaa sheegtay in xiddigaha Man United ay filayaan inuu beddelo Solskjaer.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Pochettino uu qaatay hadal-haynta qolka labiska ee Man United, Kooxda Red Devils ayaana la filayaa inay sugto ilaa xagaaga si ay isugu dayaan inay ka soo kaxeeyaan PSG.
Carrick ayaa shaxdiisa safka hore ku soo billaabay labada xiddig ee Anthony Martial iyo Donny van de Beek kulankiisii ugu horreeyay ee uu si ku meel gaar ah u hoggaamiyey Man Utd, kaasoo ay xalay ka horjeedeen Kooxda Villarreal, iyadoo Bruno Fernandes uu kursiga keydka fadhiyay.
Roberto Mancini oo ka jawaabay dalabka Man United ee ahaa inuu tababare u noqdo